Robert Hooke: Biography na ọ dị mkpa nchoputa ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Udochukwu Nwoke Ọ bụ ezigbo ọkà mmụta sayensị nke nyere ọtụtụ echiche na ọganihu na sayensị. Ọ bụkwa onye ọkà n’ihe ọmụma. Ọ bụ prọfesọ nke geometry na onye nyocha na obodo London, England. A ghọtara ya maka nnukwu onyinye ya na physics, microscopy, biology na architecture. Ọ mepụtara ngwá ọrụ dịka temometa mmanya, hygrometer, anemometer na ngwaọrụ ndị ọzọ, nke mejupụtara ihe dị mkpa nye sayensị na mmadụ.
N'ime edemede a, anyị ga-agagharị n'oge gara aga iji mụta banyere akụkọ ndụ na ihe Robert Hooke mere n'oge ndụ ya niile. Wantchọrọ ịma ihe dị mkpa nke onye sayensị a maka ụwa sayensị? Lee, anyị kọwara gị ihe niile n'uju detail
1 Ndụ na ọnwụ nke Robert Hooke
2.2 Mkpụrụ ndụ na usoro mkpụrụ ndụ
2.3 Uranus mbara ala
2.4 Planetary ngagharị tiori
Ndụ na ọnwụ nke Robert Hooke
Amuru ya na Julai 18, 1635. Ọ bụ onye ikpeazụ n’ime ụmụnne anọ, ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwanyị abụọ. A na-ekwu na ọ nwere oge owu na-ama nwa na nwute, ọ na-arịa isi ọwụwa na afọ mgbu, nke gbochiri ya igwu egwu ụmụaka ndị ọgbọ ya. Owu ọmụma ahụ dị ka nwatakịrị mere ka o jiri oké echiche na nchepụta kpọọ. O mere anyanwụ, igwe mmiri, ụgbọ mmiri ndị nwere ike ịgbanye mgbọ, wepụtara elekere ọla wee wughachi ya na osisi, na-arụ ọrụ zuru oke.
N'oge ntorobịa ya Hooke bụ akụkụ nke Choir nke uka Katidral nke Diocese nke Oxford (Christ Church College). Oge a bụ nke mepụtara Hooke na agụụ ya maka sayensị. O nwere nnukwu mmasị na ọrụ nchekwa dị iche iche emere, ebe ọ tụlere na ndị nchekwa na-eyi ha egwu.
Nzukọ nke sayensị, nkà ihe ọmụma, na ọgụgụ isi dị elu mere na Westminster School, ya mere Robert gara ọtụtụ n'ime ha. Ka ụmụ klas ha na-eme egwuregwu, Hooke lekwasịrị anya n'ịkpata ihe ọ ga-eri. Ọ malitere ịkpata ego dị ka onye enyemaka kemịkal kemịkal. Mgbe e mesịrị, ọ bụ onye na-enyere gị aka laabu. N'oge ahụ, 1658, arụpụtara mgbapụta ikuku ma ọ bụ "machina boyleana", dabere na nke Ralph Greatorex, onye Hooke lere anya "Oke oke maka nnukwu ọrụ ọ bụla".
O nwere ezigbo ikike maka mgbakọ na mwepụ. Mgbe emechara ọtụtụ ọrụ ya, amataghị ọfụma ya wee gwa ya ka ọ bụrụ onye isi oche mbụ nke Royal Society of London. Ọnọdụ a chọrọ ịbụ nnukwu nnwale na ọkachamara sayensị. Robert Hooke wepụtara oge ya niile maka ọrụ ya.
N'ikpeazụ nwụrụ na March 3, 1703 na London. Royal Society nke London kwụọrọ ya ụtụ dị ukwuu maka ihe niile anyị ga-ahụ n'okpuru.
Hooke jiri oge ụfọdụ ya na Boyle rụkọọ ọrụ na Boyle chọrọ ya ozi nke ga-ahazi ma wuo mgbapụta nke nwere ike ijikọta ikuku iji mepụta agụụ. Ha nọrọ ọtụtụ afọ na-amụ sayensị nke gas ruo mgbe ha nwetara ya. Nchọpụta mbụ ya bụ mgbapụta ikuku.
Site na mgbapụta a, ikuku nke ikuku na mmetụta ha nwere ọtụtụ oge. Ekele maka mgbapụta a, usoro nke Iwu Gas. N'ime iwu a enwere ike ịchọpụta etu olu gas si daba na nrụgide o nwere.
Ọzọ nke ọ chọpụtara bụ capillarity. Ọ na - eme mmiri banyere mmiri na mmiri ndị ọzọ site na obere iko ndị dị mkpa. N'ime nyocha ndị a, a chọpụtara na ịdị elu nke mmiri ahụ ruru na dayameta nke ọkpọkọ ahụ. A na-akpọ nke a ugbu a dị ka ikike.
Nchọpụta a ka edepụtara nke ọma na ọrụ ya "Micrography." N'ihi ọrụ ndị a, ọ nwere ike ịnwe ọnọdụ nke Curator na Royal Society of London.
Mkpụrụ ndụ na usoro mkpụrụ ndụ
N'ihi microscope, Hooke chọpụtara na mpempe akwụkwọ ahụ nwere obere oghere polyhedral dị ka ụgbụgbọ mmanụ a honeyụ. Otu oghere kpọrọ ya sel. Ihe ọ maghị bụ mkpa mkpụrụ ndụ ndị a ga-enwe n'iwu nke ndị dị ndụ.
Ọ bụkwa na Robert nọ na-ele mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ nwụrụ anwụ n'ụdị polygonal. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, a ga-achọpụta anụ ahụ nke ihe ndị dị ndụ site na nyocha ya n'okpuru microscope.
Nchọpụta ọzọ bụ ekele maka ihe ọmụma ọ nwere banyere ịhazi sel. Na narị afọ nke iri na itoolu, site na ihe ọmụma Robert Hooke nyere, enwere ike ịrụ ọrụ nkwupụta nke mkpụrụ ndụ:
Ihe nile dị ndụ nwere mkpụrụ ndụ na ngwaahịa ha.
Mkpụrụ ndụ bụ nkeji nke usoro na ọrụ.
Mkpụrụ ndụ niile sitere na mkpụrụ ndụ ndị dịbu adị. Nke a gbakwunyere na 1858 site na Virchow.
Na ngwụcha narị afọ a, ihe ọmụmụ ndị a egosila na mkpụrụ ndụ nwere ike inye anyị ma ihe kpatara na mbido ọtụtụ ọrịa. Nke a pụtara na ọ bụrụ na mmadụ na-arịa ọrịa na ọ bụ n’ihi na ha nwere mkpụrụ ndụ n’ime ya na-arịa ọrịa.
Uranus mbara ala
Ọzọkwa bụ ọrụ maka ịchọpụta mbara ala Uranus. Iji mee nke a, ọ nọ na-ele comets ma rara onwe ya nye n'ichepụta echiche banyere grav. Ọ bụ ya rụrụ ngwá ọrụ ndị a chọrọ iji mata ngagharị nke anyanwụ na kpakpando. Ihe ndị a niile nwere nnukwu ọganihu na sayensị na nchọpụta nke mbara igwe.
Planetary ngagharị tiori
Ọbụghị naanị na ọ chọpụtara mbara ụwa Uranus kamakwa ọ mepụtara Theory of Planetary Motion. Ọ nwere ike ịmepụta ya site na nsogbu nsogbu. O gosiputara ụkpụrụ nke ihe ndi mmadu na-eme, nke kachasi ike bu nke guru: aru nile na agaghari na uzo ozo, ma oburu na ike ha adighi nma, nke a gha eme ka ha megharia, ma obu uzo okirikiri ilu.
O kwuru na ozu niile nwere ike ndọda nke ha na-arụ maọbụ n’etiti ha na ike ndọda nke ihe dị n’eluigwe na-emetụtakwa ha. Ka anyị na-abịaru nso na mbara igwe ndị ọzọ, otú a ka ikike ndọrọ a na-emetụta anyị. Ọzọkwa, gbalịrị ịlele nke ahụ movedwa na-agagharị na ellipse gburugburu Sun.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Robert Hooke mere ọtụtụ ọganihu na sayensị na aha ya agaghị echezọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Udochukwu Nwoke